Askari hore oo Maraykanka ku dilay 12 qof – Sawiro • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Askari hore oo Maraykanka ku dilay 12 qof – Sawiro
Askari hore oo Maraykanka ku dilay 12 qof – Sawiro
November 9, 2018 - By: Khalid Yusuf
Weerarkan ayaa shalay ka dhacay magaalada Thousand Oaks ee gobalka California, waxaana geystay nin horey uga soo mid ahaan jiray askarta ciidamada Marineska Maraykanka.
Ninkan oo lagu magacaabo [Ian David Long] ayaa weerarka la beegsaday baar ay ku caweeyaan ardayda jaamacadaha dhigta, wuxuuna rasaas la beegsaday dadkii goobtaasi ku sugnaa isagoo sidoo kale la dagaalamay ciidamada booliiska oo goobtaasi gaaray.
Mid kamid ah askarta booliiska magaaladaasi ayaa kamid ah dadka weerarkan ku dhintay kadib markii ay rasaas isweydaarsadeen ninka weerarka geystay.
Gacan-ku-dhiiglaha ayaa markii danbe gacantiisa isku dilay kahor inta aysan goobta soo gaarin ciidamo gurmad ah.
Booliiska ayaa sheegay inay baaritaan wadaan oo ay doonayaan inay ogaadaan sababta ka danbeysa weerarkan oo markale dalkaasi ka dhaliyey dooda la xariirta hubka gacanta ugu jira shacabka.
Sawirada dadka lagu dilay weerarkan
Waxaa la xaqiijiyey in bilo kahor isla ninkan weerarka geystay ay kasoo dacwoodeen dariskiisa, isla markaana lagu sameeyey baaritaan la xariira dhinaca dhimirka iyadoo la sheegay inuu xiligaasi caafimaad qabay.